YAAB: Spain Oo Ku Faraxday Ganaaxa Manchester City Iyo Sheikh Mansour Oo La Sheegay Inuu Iibinayo City - Gool24.Net
YAAB: Spain Oo Ku Faraxday Ganaaxa Manchester City Iyo Sheikh Mansour Oo La Sheegay Inuu Iibinayo City
Madaxweynaha horyaalka kubadda cagta Spain ee LaLiga, Jaavier Tebas ayaa soo dhaweeyey ganaax laba sannadood ah oo xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA uu kusoo rogay kooxda Manchester City, taas oo aan labada xili ciyaareed ee soo aaddan ka qayb-geli doonin tartamada Yurub.
UEFA ayaa sheegtay in Manchester City ay gashay dembi halis ah oo ay meel kaga dhacday liisanka UEFA ay siisay kooxaha iyo sharciga-dhaqaale wanaagga, laakiin City ayaa markiiba sheegtay inay rafcaan ka qaadan doonto go’aanka.
Madaxweynah LaLiga, Tebas ayaa isla markii uu go’aanku soo baxay waxa uu ammaan kala dul-dhacay UEFA oo uu sheegay in ugu dambayn ay go’aan sax ah qaadatay, laakiin Tebas muu doonaynin in Manchester City oo kaliya la ciqaabo, waxa se uu sidan oo kale la doonayey kooxda reer France ee Paris Saint Germain oo hore warbaahinta uga eedeeyey.
“Ugu dambayntii, UEFA waxay qaadaysaa tallaabo muhiim ah. Dhaqangelinta qawaaniinta dhaqaale wanaagga ciyaaraha iyo in la ciqaabo kuwa lacagaha musuqa, waxay aasaasi u yihiin kubadda cagta mustaqbalka” Sidaas ayuu Tebas kusoo qoray bartiisa Twitterka.
Madaxweynaha horyaalka LaLiga, waxa kale oo uu tilmaamay in sannado badan ay Manchester City iyo PSG ay soo samaynayeen khiyaamooyin lid ku ah shuruucda kubadda caggta, waxaanu yidhi: “Muddo sannado ah ayaanu ku baaqaynay in tallaabo adag laga qaado Manchester City iyo Paris Saint Germain, waxaananu ugu dambayntii helnay tusaale ciqil ah oo aanu rajaynayno inaanu in badan sii aragno.”
Dhinaca kale, halyeygii hore ee Manchester City ee Rodney Marsh ayaa waxa uu sheegay in ganaaxani uu sababi karayo in Sheikh Mansour uu ka tago naadiga uu lacagta badan geliyey oo uu iska iibiyo, laakiin Mchael Brown oo isaguna khadka dhexe uga ciyaari jiray Man City ayaa waxa uu rumaysan yahay in Sheekha Abu Dhabi uu u dagaallami doono inuu kooxda ka saaro dhibaatada soo waajahday.